दोस्रो लहरले ननिम्त्याओस दुर्दशा – Nepal Japan
कलङ्की, बल्खु र कोटेश्वरको अवस्था हेर्दा दशैँभन्दा बढी भिडभाड
एकराज पाठक १६ बैशाख १९:००
काठमाडौँभित्र र बाहिर गर्ने मुख्य नाका कलङ्कीको बुधबार साँझको अवस्था हेर्दा यहाँ सरुवा रोगको महामारी छ भन्ने नै लाग्दैनथ्यो । त्यसैले यहाँ बसोबास गर्दै आएका हजारौँ नागरिकले राजधानी शहर छोड्ने तरखर गर्दै थिए । आ–आफ्ना घरगाउँ फर्किने हतारमा रहेका उनीहरु भन्दै थिए “भोलि बिहानै निषेधाज्ञा लागिसक्छ, आजै रातिसम्म काठमाडौँ छोडिसक्नुपर्छ, नत्र पहिलेजस्तै विनाकाम महिनौँ यहीँ थन्किनुपर्छ ।”
यस्तो हत्ते गरेर किन घर जान लाग्नुभयो ? मैले सोधेँ । उहाँको जवाफ थियो, “गत साल मैले धेरै दुःख पाएँ । सरकारले गत वर्षको चैतमा सात दिनका लागि मात्र भनेर लकडाउन ग¥यो । हामी घर जाने समय पनि भएन । हामी सर्वसाधारणले त्यही सात दिनमात्र होला भनेरै बुझ्यौँ तर पछि त्यस्तो भएन, लकडान साउनसम्मै पुग्यो । न यहाँ काम गर्न पाइयो, न केही खाने कुरा भयो नत घर फर्किन पाइयो । यसपालि पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर आजै घर हिँडेको ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिनहुँ भाइरस सङ्क्रमणका तथ्याङ्क बढेर आउन थालेपछि गरेको एक अध्ययनअनुसार अहिले कोरोना देखिएका एक व्यक्तिले यो सङ्क्रमण दुईभन्दा बढी व्यक्तिलाई सारिरहेको देखिएको छ । ‘‘सङ्क्रमणको विस्तार ज्यामितीय दरमा भइरहेको र भाइरसको सङ्क्रमणको ‘चेन’ तोड्न अहिले नै अत्यावश्यक कामबाहेकका अरु सबै सेवा बन्द गरेर नागरिकलाई घरघरमै राख्नुबाहेकको अर्काे विकल्प नरहेको”, प्रवक्ता प्रा डा जागेश्वर गौतम बताउनुहुन्छ ।
यो अध्ययनपछि मानिसलाई घरबाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने निर्णयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू करिब दुई साताअघि नै पुगिसकेका थिए । प्राडा गौतम भन्नुहुन्छ, “पहिलेको भन्दा यसवर्ष निकै घातक रुपमा महामारी बढिरहेकोले अब यसको चेन ब्रेक गर्न निषेधाज्ञाबाहेकको अर्काे विकल्प नै देखिँदैन ।”
स्थितिमा सुधार आउनका लागि निषेधाज्ञाको प्रभावकारिता अझै बढाउनुपर्ने र एकदेखि अर्काे शहरको आवतजावत तथा एकदेखि अर्को मानिसको भेटलाई टुटाउनुपर्ने उनहीहरुको सुझाव छ । दुई सातामा यसको प्रभाव देखिन थाल्ने र अहिलेलाई यति समय पर्याप्तजस्तो लागे पनि दुई सातामा कोभिडका सङ्क्रमितहरु घट्न थालेपछि पनि निषेधाज्ञाको स्वरुपलाई विस्तारै खुकुलो पार्ने तर ह्वात्तै खोल्न नहुने सुझाव उनीहरुको छ ।
अर्काे कुरा निषेधाज्ञाले गर्दा हरेक व्यक्तिबीच घुलमिल र सम्पर्क हुन नपाउँदा सङ्क्रमणको जालो तोडिन सक्नेछ र रोगको विस्तार हुन पाउँदैन । यसकारण पनि निषेधाज्ञाले सङ्क्रमण दर घटाउने विश्वास गरिएको हो । तर यतिखेर राजधानी, शहर र बजार क्षेत्रबाट गाउँ जानेहरूबाट सङ्क्रमण फैलिने जोखिम भने कायमै रहेको देखिन्छ । कतिपय विज्ञहरुले एक÷दुई साताको निषेधाज्ञाले फरक नपार्ने र यसलाई कम्तीमा पनि एक महिना लम्ब्याउन सकिएमा सङ्क्रमणको गति सीमित गर्न सहयोग पुग्ने बताउँछन् ।
प्रतिरोध क्षमता बढाउनको लागि भन्दै विगतमा नेपालमा पनि बेसार पानी, गुर्जाे या अनेकथरि जडिबुटीको सेवन गर्ने मानिस धेरै थिए । उनीहरुले सेवन मात्र गरेनन् सम्बन्धित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सिफारशबिना नै यो खानु र उखानु भनेर सञ्चारमाध्यमबाटै प्रचार पनि गरे । अहिले पनि कतै अम्बाको पात उमालेर खाने या कतै के भनेर प्रचार गरिएका छन् । तर कतिपय जडीबुटीले शरीरको ‘स्टामिना’ बढाउने काम गरे पनि कोरोनाकै औषधि भनेर केही पनि सेवन गर्नुहँुदैन ।
अहिलेसम्म नेपालमा तीन लाख १२ हजार ६९९ जना यो भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन् भने दुई लाख ७९ हजार २७९ जना निको भएका छन् । यसरी हेर्दा नेपालमा अझै पनि ३३ हजार जनाभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमति रहेका छन् । यो महामारीबाट तीन हजार जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । विश्वमा यसले ३० लाखभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको छ भने करोडौँ नागरिक सङ्क्रमणमा परेका छन् ।
सन् २०१९ कै डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट निस्किएको भनिएको कोभिड १९ जीवाणुले अहिले विश्व विचरण गरिरहेको छ । यो अदृश्य जीवाणुले छ महिनाअघि बेलायतमा फेरि अर्कै स्वरुपको प्रजातिका रुपमा प्रकटा भएको बताइन्छ । वर्षदिन भन्दा लामो समयसम्म पनि त्यही पुरानै जीवाणुलाई परास्त गर्न नसकिरहेका बेला यसले नयाँ नयाँ प्रजातिका रूपमा जन्म लिइरहेको छ । अरु विश्वतिर विभिन्न स्वरुप र चरणमा चाहारिरहेको भनिएको यो जीवाणु यतिखेर नेपालमा पनि दोस्रो लहरका रुपमा फेरि भित्रिएको छ ।
हामीले वर्ष दिनभन्दा लामो समयदेखि यसका बारेमा धेरै सुनेका र जानेका पनि छौँ । अब हरेकले अरु सबै विर्सिएर सबैभन्दा पहिला आफैँलाई बचाउने प्रणका साथ खानपिन, आनीबानी र व्यवहारमा परिवर्तन गरौँ । मानिसको सबैभन्दा प्रिय वस्तु आफ्नै शरीर भएकाले आफूलाई बचाउने प्रणका साथ हामी लग्यौँ भने यसबाट अरुको हुँदै सबैको ज्यान बाँच्ने छ । सबैले मिलेर कामना गरौँ– दोस्रो लहर भनिएको यो महामारीले हामी कसैको घरआँगनमा दुर्दशा ननिम्त्याओस् ।
कोरोनाको कहरमा लोसार
पृथ्वीनारायण शाहको पुनर्जन्म वा पुनरागमन संभव छ ?
कालीगण्डकी सभ्यताको एक गन्तव्य ‘केलादीधाम’